Jubaland oo sharaxeysa mowqifka shirka Rooble, dalbatay hal qodob - Axadle – Axadle
Jubaland oo sharaxeysa mowqifka shirka Rooble, dalbatay hal qodob – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On May 3, 2021
Kismaayo (Axadle) – Dowlada Jubaland ayaa shaacisay inay kaqeyb galeyso shir uu iclaamiyay raiisul wasaaraha xukuumada somaliya maxamed xuseen rooble oo ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir 20-ka bishaan.
Madaxweyne ku xigeenka Maxamuud Sayid Aadan Madoobe ayaa BBC-da u sheegay in loo baahan yahay tanaasul la xiriira danaha dadka Soomaaliyeed, wasiirka Loogaana u baahan yahay in uu xaliyo arrimaha la isku haysto.
Jubaland waxay ka qeyb galeysaa shirkii uu R / wasaaruhu ugu yeeray 20-ka bishaan, si kasta oo aan dooneyno doorashada kahor, miiska ayaan sare u qaadeynaa ”ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Maxamud Sayid Aadan Rooble wuxuu adeegsaday xalka la doonayay in lagu daro gobolka Gedo looga saarayo ciidamada wuxuu sheegay in siyaasada milmeynka, iyo sidoo kale in lagala hadlo afduubka Jubaland ee gobolka wuxuuna tilmaamay in Axadle xoog looga dhigay.
“Waxaan sidoo kale ku dhiiri galinaynaa Ra’iisul Wasaaraha inuu ku daro qorshihiisa amniga qaranka ee hada xal u helida xoogaga siyaasadeed ee isku milmay labadii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan kuwa gobolka Gedo ee albaabada ka xirtay.” guddi ka socda Muqdisho, ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan.
Su’aasha ah in Jubaland shuruud ku xirtay kaqeybgalka doorashada Ra’iisul wasaare Rooble wuxuu yiri dalabaadka ururka, laakiin wuxuu u joogi doonaa caqabado dhowr ah oo carqaladeynaya heshiiskii hirgalinta ee Sebtember 17 oo miiska wicitaanku uu soo galayo wadahadal isla markaana muujinayo. rajeynayaa in finalka.
Ugu dambeyntiina, Madaxweyne ku-xigeenka Jubaland ayaa ka jawaabay su’aal ahayd Madaxweyne Axmed Madoobe ma tagi doonaa Caasimadda Muqdisho isaga iyo ciidamadiisii ​​hore iyo inuu hadda aamini doono ra’iisul wasaare Rooble, in ilaalinta qofka mas’uulka ah aysan isaga ku xirneyn. Hubaal la’aan iyo hubanti la’aan laakiin waxaa ka go’an inay ka soo qayb galaan shirka.
Dhanka kale, Dr. Axmed Jaamac Xirsi Cali Gani Gaan in Ra’iisul Wasaare Mohamed Hussein Roble xirirkainta looga baahan yahay inuu qabto jagooyinka taliyaha ciidanka si uu u aado doorasho lagu kalsoonaan karo.
Xirsi Jaamac wuxuu qoray taageerayaasha Twitterka wuxuu tilmaamay in Raiisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble looga baahan yahay inuu adeegsado awoodiisa dastuuriga ah iyo waajibaadka saaran taasoo qayb ka ah qadada uu ka qaato taliyeyaasha Soomaaliya.
“Sida ku cad qodobka 99-aad ee dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, waxaa ka mid ah xuquuqda Ra’iisul Wasaaraha iyo fulintiisa ay u leeyihiin inay dalacsiiyaan ama shaqada ka eryaan taliyayaasha ciidamada. Waxaan kula talinayaa Ra’iisul wasaare Rooble inuu adeegsado awoodiisa si uu uga faa’iideysto xoogaga cutubka” ayuu yiri Xersi Gaani.
Abdiwahab Ahmed 1013 posts
The Sheffield Utd victory reveals how badly Tottenham have misplaced this season
How 90min writers voted the Soccer Participant of the 12…
Difaaca Faransiiska Ee Aymeric Laporte Oo Lagu Darayo…
90 minute championship at the top of the…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Man United vs…
What Boubakary Soumare would give to…